Buy Acer i3 4th gen Laptop in ရန်ကုန် (280,000 Ks) on ipivi
အလုံးသန့် ၉၉%new နော် Acer i3 4th gen Laptop
#ကဲကဲ အသစ်လိုသန့်တာ ကိုင်ချင်တာ ဘယ်သူလဲဗျ
#Acer i3 4th gen လေးဗျာ.. ပါးပါးပေါ့ပေါ့လေး
#Photishop. Video Edit. Game ရုံး၊ ကျောင်းသုံးကွာ
#ဈေးနူန်း (280,000 ks)
#CPU 👉 Core i3 4th generation
#Battery 👉 3.5 hrs ရပါတယ်
#Price. 280,000ks 👍👍
အမည်:Acer i3 4th gen Laptop